dimanche, 07 avril 2019 22:39
Tetikasa « Miami » : Ho vita afaka telo herinandro ny drafitra
Nambaran’i Andry Rajoelina tamin’ny lahateniny, androany, nandritra ny fametrahana ny vatofehizoron’ny asa fanamboarana ny lalana “voie rapide” mampitohy ny seranantsambon’i Toamasina sy ny lalam-pirenena faha-2 fa hovita afaka telo herinandro ny drafitry ny tetikasa « Miami » na fanavaoazana tanteraka ny “bord” Toamasina hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena.
Fampanantenana nataon’i Andry Rajoelina tamin’ny fampielezan-kevitry ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin’ny 2018 ity tetikasa « Miami » eto Toamasina ity.
Pierrot Matatana: Marary mafy tsaboina ao Befelatanana
I Lianah Brandy na Lianah, araka ny ahafantaran’ny maro azy eo amin’ny sehatry ny mozika, no nampahafantatra sy manao antso avo ao amin’ny pejiny facebook, amin'ny fifanomezan-tanana, fa marary mafy tsaboina ao amin’ny hopitaly Befelatanana Antananarivo, sampana “Cardiologie bâtiment USiC, varavarana faha-109", i Pierrot Matatana.
“Tsentsina lalandra amin’ny fo” no mahazo ity farany, ary “tsy maintsy entina any ivelany ny fitsaboana” ka ilana vola 50.000.000 Ar na 250.000.000 Fmg.
Mpihira sady mpamoronkira miara-miasa amina mpanakanto maro i Pierrot Matatana.
Mijoro ny fikambanan’ny mpamboly lavanila matihanina aty amin’ny Kaominina Ambodiriana Toamasina II, ka tena liana ny vahoaka izay niarahana nijery ny ezaka vao natomboka sy izay efa vita.
“Mpamboly Tsy Veta (MTV)”, hafa kely ny anaran’ny fikambanana. Ny antony nisafidianana io anarana io, hoy ny mpitarika, dia mba hampirisika ny tantsaha hanatsara fomba fambolena mba tsy ho vesatry ny firenena.
dimanche, 07 avril 2019 17:54
Maroantsetra : Tonga nandamina ny ira-panjakana
Milamindamina eto Maroantsetra taorian’ny rotaka omaly. Tonga teto an-toerana androany maraina ny ira-panjakana notarihin’ny minisitry ny Ati-tany Razafimahefa Tianarivelo sy nahitana ny minisitry ny filaminam-bahoaka Rafanomezantsoa Roger ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, Jeneraly Richard Ravalomanana, ny Komandin’ny Zandarimariam-pirenena Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa ary Kaomandà Velonjara, izay zanak’i Maroantsetra, nanao fandaminana sy nitondra fananarana, ary koa niantso fiaraha-miasa sy fandraisana andraikitra avy hatrany.
Nisy ny tafa nivantana nifanaovan’izy ireo tamin’ny vahoaka teto Maroantsetra, tsy natrehin'ny tompon'andraikitra teto an-toerana nahafahan'ny vahoaka naneho hevitra an-kahalalahana. Nanambara ny ira-panjakana fa hanokafana fanadihadihana avy hatrany ny momba ny herisetra sy fampijaliana nitarika ny fahafatesan’ny tovolahy iray mpianatra kilasy “3ème”, avy any amin’ny Kaominina Antakotako voatana tao amin’ny “violon”-n’ny Polisy ny alin’ny zoma 5 aprily, ary vatana efa tsy nisy aina intsony no tonga teo anoloan’ny dokotera rehefa nentin’ny Polisy teny amin’ny hopitaly.
Ny 400 amin’ireo no filan’ny tsena eto Antananarivo sy ny manodidina, raha 1 500 ny omby vonoina amidy eny an-tsena isan’andro manerana ny Nosy, ankoatra ireo novoina amin’ny resaka kolontsaina sy ireo vonoina an-tsokosoko na rainizavona.
Miisa 11 ny karazan’omby eto Madagasikara, ary tombanana eo amin’ny 10 tapitrisa eo ny isan'izy ireo mitambatra, raha mananika ny 27 tapitrisa ny isan’ny mponina.
Ela no nanirian’ny tanora tato amin’ny Boriborintany faha-II Antananarivo Renivohitra toeram-pilalaovana tsipy kanetibe manara-penitra. To izany ankehitriny, noho ny tolotanana nataon’i Randrianarisoa Stanislas na Rastany, araka ny ahalalan’ny maro azy.
Vita ankehitriny ny kianja eo Ambohipo, ary afaka misitraka izany ny mpitia tsipy kanetibe rehetra. Nankasitraka izao hetsika fiaraha-mientana nataon’i Rastany, izay kandidan’ny TIM K25 amin’ny fifidianana solombavambahoaka, izao ho fampandrosoana ny taranja tsipy kanetibe ny tanora eto amin’ny Boriborintany faha-II.
dimanche, 07 avril 2019 14:28
Toamasina: Haharitra 24 volana ny fanamboarana ilay lalana “voie rapide”
Napetraka androany ny vato fehizoron’ny fanamboarana ny lalana “voie rapide” mampifandray ny seranantsambon’i Toamasina amin’ny lalam-pirenena faha-2. Tonga teto Toamasina nitarika izany ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina.
dimanche, 07 avril 2019 14:09
CAN 2019: Hatao amin’ny 12 aprily ny fisarihana hisokajiana anaty vondrona ireo ekipa 24
Hotanterahina ao Caire, renivohitr’i Egypta amin’ny 12 aprily izao ny fisarihana hisokajiana anaty vondrona ireo ekipam-pirenena miisa 24 tafita amin’ny dingana famaranana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika 2019, araka ny fanamafisana nataon’ny CAF (Confédération Africaine de Football).
Ireto avy ireo ekipam-pirenena hifaninana amin’ity andiany faha-32, izay hotanterahina ny 21 jona ka hatramin’ny 19 jolay 2019 : Sénégal, Madagascar, Maroc, Cameroun, Mali, Burundi, Algérie, Bénin, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Zimbabwe, RD Congo, Guinée, Côte d'Ivoire, Angola, Mauritanie, Tunisie, Egypte, Guinée Bissau, Namibie, Ouganda, Tanzanie.
Ity fihaonana any Egypta ity no isantarana ny fifaninanana ho an’ny ekipa 24, raha 16 izany tao anatin’ny andiany 31 lasa teo. Ho fantatra eo izay handimby toerana an’i Cameroun, tompondaka farany tamin’ny 2017.
dimanche, 07 avril 2019 09:15
7 avril: batailles d'oreillers
7 avril: Journée mondiale de batailles d'oreillers.